Envoyer à l’adresse email Votre nom Votre adresse e-mail. Ny mahatsikaiky anefa, dia nandritra io herinandro io ihany koa no nanomanan’ny governemanta ny fihaonam-ben’ny antoko politika malagasy rehetra , ka anisan’izany ihany koa ny mpanohitra. Dia toy izany ary ny tantara teto Madagasikara! Dikandahatsoratra Vakio amin’ny teny Français , Español , English. Mbola mitohy ny fampihenjana-tady. Navoitran’ny fanambarana an-gazety ary fa:. Nisy ve ny fifandonana?
Fa miandry fotoana ny zavatra rehetra Iza no mahita raha sarinady anakonana ny fanomezana ny tany 1. La vérification e-mail a échoué, veuillez réessayer. VIVA, iray amin’ny televiziona eto Madagasikara, no nahazo didy avy amin’ny Minisitry ny fifandraisandavitra hitsahatra:. Tena mahavita izany mihitsy ny mponina’Antananarivo tahaka ny niambenana ny teny Faravohitra ka! Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress. Tsy azoko hoe rehefa mifandanja dia maninona?
Tokony eon 30 eo ho eo moa ny doj politika nandà tsy hanatrika. Tsy nisy fitaovam-piadiana maro azo akory manko tao. Hijery ny Tenim-Pirenena rehetra?
Araka ny vohikalan’ny Filohany tanjon’ny fanovana dia ny hanamafisana bosoc antoko politika ka ahafahany mandray anjara mavitrika amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.
Anarana tsy maintsy fenoina. Tahiry isambolana Tahiry isam-bolana. Fa miandry fotoana ny zavatra rehetra Iza no mahita raha sarinady anakonana ny fanomezana ny tany 1.
Bksco nalaza dia nalaza tokoa io daty io ka nahafantatra azy avokoa ny mpitolona sy ny mpitondra fanjakana. Dia toy izany ary ny tantara bosvo Madagasikara! Miasa eny ambanivohitra no anton-draharahako ary manao asa fampandrosoana fa rehefa ny maha-malagasy no iaingana ampidirana ilay fampandrosoana dia mety tsara ary tena mora ny fandraisana an-tanana azy ka maharitra ny tetikasa apetraka ho ay ireo.
Ny marik-ity takelaka ity dia efa voapetraka Creative Commons Attribution 3. Avertissez-moi par e-mail des nouveaux articles.
Nafana ihany koa ny resaka momba an-dRatsiraka ao amin’ny serasera. Ary aza matahotra fa tsy maintsy ho lasa filoham-pirenena ingahy ka! Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter: Raha hamaly ity hevitra ity.
VIVA, iray amin’ny televiziona eto Madagasikara, no nahazo didy avy amin’ny Minisitry ny fifandraisandavitra hitsahatra:.
Tena mahavita izany mihitsy ny mponina’Antananarivo tahaka ny niambenana ny teny Faravohitra ka! Ny fandaharam-potoana tamin’io andron’ny 17 Desambra io dia ny hisian’ny fifanakalozana malalaka dln amin’ny samy mpilalao politika, ka hivoaka avy ao ny tolo-dalàna hanovana ny fitsipika mifehy ny antoko politika.
Sondrian-tory aho nony nisasaka ny alina. Telopolo taona mahery i Andry Rajoelina Ben’ny tanànan’Antananarivo, tompon’ny VIVA, sy tompona orinasa hafa manam-pahombiazana, tahaka ny Injet, orinasam-pifandraisana, sy ny Domapub, orinasan-dokambarotra iray misongadina tantanin’ny vadiny, Mialy Razakandisa, avy amin’ny fianakaviana malaza.
Miandry ny andro hiposaka daholo vao mivaly izay rehetra mety ho fanontaniana manitikitika ny be sy ny maro. Lohahevitra Fahalalahàna miteny Fanoherana Fifidianana Politika.
Tokony hifandanja anefa ny hevitry tatnara andaniny syny ankilany farahafaharatsiny.
Tsara ny manamarika fa mpanohitra teo aloha? Tantarx ny fitsikerana mivaivay an-dRavalomanana io lahatsary io ary azo jerena amin’ny teny malagasy ao amin’ny dailymotion. Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook.
Ny mahatsikaiky anefa, dia nandritra io herinandro io ihany koa no nanomanan’ny governemanta ny fihaonam-ben’ny antoko politika malagasy rehetraka rdaio ihany koa ny mpanohitra. La vérification e-mail a échoué, veuillez réessayer.
Alefaso imailaka ny hevitra hafa mipoitra amin ity lahatsoratra ity. Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. Email Facebook Twitter Imprimer.